Urhwebo lubonisa ukomelela okunamandla, ukomelela kubhubhane
Abasebenzi balayisha iipasile ze-e-commerce ezinqamlezayo, e-Huanghua International Airport e-Changsha, kwiphondo lase-Hunan, nge-28 ka-Meyi ka-2020. ngoMvulo, kunye Silk Road E-commerce bei ...
Ingingqi yaseTshayina inika ingxelo ngamatyala amatsha e-COVID-19 asasazeke apha ekhaya
Abasebenzi bezonyango baqokelela iisampulu zovavanyo lwe-nucleic acid kwisithili saseBayuquan, kwisixeko saseYingkou, kwiphondo lase-Liaoning eMantla e-China, nge-16 kaMeyi, ngo-2021. iNatio ...
Umnyango oqinileyo weenkuni kulula ukuba ungcoliswe, kuya kufuneka sinike ingqalelo ukwahlula umnyango wepaneli kunye nomnyango oqinileyo womthi
Kukho uhlobo lomnyango oqinileyo wokhuni oluqhelekileyo, oluhlala lolona cango luqinileyo lupapashwa ngokulula. Makhe sijonge kumbono wokhuni oluqinileyo lomthi kuqala. Umgangatho omtsha ucacisa ngokucacileyo ukuba umnyango one-veneer yomthi oqinileyo ngumnyango onezinto ezisisiseko zomthi oqinileyo ...
I-PMI ibonisa ukuba ukukhula kuhlala kumkhondo olungileyo
Imisebenzi yokuvelisa yase China yandisiwe ngesantya esincinci kancinci ngo-Epreli, njengoko kubonisiwe sisalathiso sabaphathi bezentengiso esihla saya kwi-51.1 kwinyanga ephelileyo ukusuka kwi-51.9 ngo-Matshi, Idatha yeZiko leeNkcukacha-manani eboniswe ngoLwesihlanu. Kodwa isalathiso sisahleli kakuhle ngaphakathi kolwandiso ...
Kumhombiso wale mihla, ngenxa yomnyango wokhuni uneempawu zokuvala ubume bendalo kunye neziphumo ezahlukeneyo zokuhombisa, kuye kwaba lukhetho lwabantu abaninzi ukuhombisa igumbi. Ke emva kokuba ucango lweplanga lufakiwe, ungaqinisekisa njani ukuba inkonzo yenkonzo yomnyango weplanga igcina i-littl ...
Umnyango ayisiyondawo nje yokuhombisa indawo, kodwa ikwangumgcini wendawo nganye ezimeleyo. Intle, ithule, ikhuselekile kwaye neminye imisebenzi ibalulekile, kodwa "yomelele" kulula ukungahoywa ngabasebenzisi bokuqala. Kuba iimveliso ezingapheliyo azizukuveza ngokukhawuleza iingxaki ezininzi ...
Umnyango womthi ekhaya, kufuneka ubambe indawo ebalulekileyo. Umgangatho womnyango womthi, uhlobo, isitayile, uphawu kunye nokunye, zonke kufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha umnyango wokhuni. Ngokwentlobo, kukho iminyango yasimahla ye-lacquer, iingcango zendalo, iingcango zomthi eziqinileyo, iingcango zomthi oqinileyo, iinkuni zangaphambili ...
Urhwebo lubonisa ukomelela okunamandla, ukomelela ...
Ingingqi yaseTshayina inika ingxelo entsha ye-4 yalapha ...